50% yeiyo iPad neMac yakatengeswa kota yekupedzisira ndeyevatengi vatsva | IPhone nhau
Ehe Apple yakazvitora nekutengesa kweiyo iPad nyowani uye maMac matsva.Sezvo pfungwa iyi, kambani inoratidza zvinoshamisa manhamba maererano nemari uye purofiti yakawanikwa mukati mekota yekupedzisira yemari, asi chakanyanya kukosha ndechekuti kambani Cupertino inonyevera izvozvo 50% yeMac uye iPad vatengi vatsva kune yakasimba.
Izvi zvinoreva kuti inopfuura hafu yemaroja akawanikwa neApple munguva ino yekupedzisira anouya kubva kune vashandisi avo anga asati ambova nemidziyo yeApple kare. Nhau dzinoshamisa kwazvo ndedzekuti kambani yakawedzera makumi mashanu neshanu muzana emari yayo mukota yekupedzisira ichienzaniswa nenguva yakafanana yegore rapfuura.
Hatina mubvunzo kuti iyo iPhone inoramba iri iyo kambani inopa mari yakawanda, asi Mac neIpad zvinoramba zvichiwedzera mari yavo. Mukuru weApple wezvemari, Luca Maestriakadaro panguva yemusangano wemhedzisiro yezvemari kuti hafu yekutengesa kweMac uye iPad mukati mekota yechipiri yakaenda yakanangana nevatengi vatsva. Uku kukura kunoshamisa izvo zvinoreva kuti chigadziko chinoshanda chemaApple zvigadzirwa zvinoramba zvichikura uye izvi zvine musoro zvichakwanisa kukura masevhisi avanopa muApple.
Kuuya kweM1 kweMac kwave kuchinyatso kureva imwe shanduko yakakosha mumafungire evashandisi uye izvo ndezvekuti mukuwedzera kune kuwana mutengo unodhura kupfuura neveIntel processor, vashandisi vane zvakafanana kana zvirinani kuita ne midziyo. Izvi akawedzera kuchishuwo chekuti vashandisi vazhinji vanofanirwa kuchinjira kuApple ecosystem inoita kuti nhamba dzive dzinoshamisa kwazvo mukota yapfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » 50% yePads uye maMac akatengeswa kota yekupedzisira ndeyevatengi vatsva